JYP ကိုစွန့်ခွာပြီးနောက် ဂီတနယ်ပယ်ကိုပါ အပြီးတိုင်နှုတ်ဆက်ဖို့ စဉ်းစားခဲ့ဖူးတဲ့ GOT7's Mark
GOT7 အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Mark ဟာ JYP Entertainment ကနေ အဖွဲ့လိုက်အပြီးတိုင် စွန့်ခွာခဲ့ပြီးနောက် တကိုယ်တည်းရှေ့ဆက်ဖို့ တွန့်ဆုတ်ခဲ့ကြောင်း NME နဲ့ အင်တာဗျူးမှာ ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ အဆိုးဆုံးအနေနဲ့ ဂီတနယ်ပယ်ထဲကနေပါ အပြီးတိုင်စွန်ခွာဖို့အထိ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ဖူးရှာပါတယ်။
အင်တာဗျူးမှာ Mark က “GOT7 အဖွဲ့ဝင်တွေဟာ ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဂီတအစွမ်းအဆကို ပြချင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ GOT7 အဖွဲ့လိုက်အနေနဲ့လည်း အကောင်းဆုံးကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ကိုယ်ပိုင်ထူးခြားချက်ကို ချပြနိုင်တာမျိုး မရှိခဲ့ပါဘူး။ GOT7 နဲ့ ဖြတ်သန်းနေသရွေ့ တစ်ဦးတည်းခွဲထွက်ပြီးလုပ်ချင်တာမျိုးလည်း စိတ်ကူးမယဉ်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်။
JYP နဲ့ လမ်းခွဲပြီးနောက် ကျွန်တော်ဟာ Los Angeles ကို ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်လေ ဂီတအိပ်မက်တွေ ဆက်လုပ်ချင်စိတ်ပါ ပျောက်ဆုံးခဲ့တယ်။ ၂၀ ကျော်ကာလတွေတုန်းက GOT7 နဲ့ပဲ သက်တောင့်သက်သာ အဆင်ပြေပြေဖြတ်သန်းခဲ့ရတော့ ရှေ့ဆက်ပြီး တစ်‌ယောက်တည်းဆက်လုပ်ဖို့ဆိုတာဟာ ဖိအားသိပ်များခဲ့ပါတယ်။ သီချင်းတစ်ပုဒ်လုံးကို ကိုယ့်ဘာသာ လုပ်နိုင်စွမ်းရှိပါ့မလား? လူအများရဲ့အာရုံကို ဆွဲဆောင်နိုင်ပါ့မလား? ဆိုပြီး တွေးပူမိခဲ့တယ်။
ဒီလိုနဲ့ စိတ်ရှင်းရှင်းထားပြီး studio ထဲ ပြန်ဝင်မိမှသာ ကျွန်တော့်အတွက် ထုတ်လုပ်ရေးကောင်းနဲ့ ဆုံတွေ့ပြီးနောက် ဂီတဆက်လုပ်ဖို့ အခွင့်အရေးရှိတယ် လို့ ခံစားမိခဲ့ရပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင်ဂီတဖန်တီးရတာ ပျော်ဖို့ကောင်းလာတာကြောင့် ရှေ့ဆက်လုပ်ဖို့ ရွေးချယ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ solo artist ဖြစ်လာရတာ စိတ်လှုပ်ရှားဖို့ကေင်းပြီး သီချင်းပုံစံမျိုးစုံလည်း ဖန်တီးလို့ရပါတယ်။
K-pop idols ဆိုတဲ့ ပုံရိပ်လည်း ရှိနေတော့ အချိန်တစ်ခုတော့ပေးရပါတယ်။ ဘက်ညီအောင် ကြိုးစားပြင်ဆင်ရင်း သီချင်းသစ်တွေအတွက် ကြိုးစားနေပါတယ်” ဆိုပြီး ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ Mark ကတော့ ဂီတနယ်ပယ်ထဲမှာ သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပုံစံသစ်ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါပြီ။ တစ်ဦးတည်းလှုပ်ရှားရတာကို အသားမကျသေးတာကြောင့် အခက်အခဲတွေရှိလောက်ပေမဲ့ ဂီတအိပ်မက်တွေကို လွှတ်မချဘဲ ရှေ့ဆက်ခဲ့တဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်မိပါတော့တယ်။
Next 2021 ခုနှစ်ရဲ့ အချမ်းသာဆုံး သူဌေးမလေး Kpop idol (7) ယောက် »
Previous « သရုပ်​ဆောင်​နယ်ပယ်ထဲကို စတင်​ခြေချရာမှာ ကံမ​ကောင်းမှု​တွေကို ​တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ idol (၄) ဦး